Izibalo Zokukhangisa Okuqukethwe kwe-2019 | Martech Zone
Izibalo Zokukhangisa Okuqukethwe kwe-2019
NgoMsombuluko, Septemba 30, 2019 NgoMsombuluko, Septemba 30, 2019 UJosh Wardini
Ukuthola ithuluzi elifanele lokuphromotha elingagcini nje ngokufinyelela izethameli kepha nokwakha ukuxhumana nababukeli kuyinto enzima. Eminyakeni embalwa edlule, abathengisi bebelokhu begxile kulolu daba, behlola futhi bebeka imali ngezindlela ezahlukahlukene ukuze babone ukuthi iyiphi esebenza kahle kakhulu. Futhi akumangazi muntu, ukumaketha kokuqukethwe kubambe indawo yokuqala emhlabeni kwezokukhangisa.
Abaningi bacabanga ukuthi ukumaketha kokuqukethwe bekukhona kuphela kule minyaka embalwa edlule selokhu i-intanethi yaduma umhlaba wonke ngokusiza ukuhwebelana kwemininingwane okushesha kakhulu.
Kodwa-ke, uma sibhekisisa, empeleni singabona ukuthi indlela yokukhangisa kokuqukethwe ibilokhu ikhona kusukela ngekhulu le-19. Ngaphezu kwalokho, kusizile ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwezimboni ezahlukahlukene.
Konke kwaqala ngasekupheleni kwekhulu le-19. Intuthuko yezobuchwepheshe kwezokuxhumana kanye nezokuthutha kube yizinguquko zokuqala ezinkulu emphakathini ezivumele izinkampani ukuthi zakhe ukuxhumana okuqinile namakhasimende abo. Isibonelo esihle sokuthi lokhu kwenzeka kanjani singathathwa ngonyaka we-1885 lapho Umsele unikeze abalimi ulwazi nezeluleko zokuthi bangalithuthukisa kanjani ibhizinisi labo. Ngonyaka we-1912, lase liqoqe abafundi abajwayelekile abangaphezu kwezigidi ezine.
Esinye isibonelo sivela enkampanini yamathayi yaseFrance UMichelin, eyakha umhlahlandlela wamakhasi angama-400 owawunikeza imininingwane kubashayeli ngokusekelwe ezelulekweni zokuhamba nokunakekelwa kwezimoto.
Imininingwane evela emlandweni iveza lokho ukumaketha kokuqukethwe kudlule ngoshintsho olukhulu futhi yashaya inani eliphakeme ekuqaleni konyaka we-1920 lapho kwakhiwa umsakazo. Ukuthenga isikhathi somoya nokuxhasa izinhlelo ezidumile kwaba yindlela engcono kakhulu yokwazisa nokukhangisa. Kusebenze izimangaliso kubakhangisi ababona ngokushesha amandla ayo ngaleso sikhathi.
Isibonelo esihle kakhulu salomkhuba singathathwa enkampanini I-Oxydol Soap Powder, okwaqala ukuxhasa umdlalo weshashalazi odumile. Izithameli ezazibhekiswe kuzo zacaciswa kahle ukuthi zingomama bezindlu, futhi uphawu aluzange luphumelele kuphela - ukuthengisa kwalo kwenyuka kakhulu. Lokhu kusethe izindinganiso ezithile ezintsha kumdlalo wokukhangisa, futhi kusukela lapho, izinto ziye zathuthuka kuphela.
Ngokushesha phambili osukwini lwanamuhla, futhi abathengisi bashintshe ukugxila kwabo ekusatshalalisweni kokuqukethwe kwedijithali ngokukhuphuka kwekhompyutha, i-smartphone kanye ne-Intanethi.
Into eyodwa ihlala ingashintshiwe, noma kunjalo:
Ukumaketha kokuqukethwe kuhlala kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuphromotha nezokukhangisa. Abakhangisi bathuthukisa amasu amasha, okuqukethwe okusha, nezindlela ezintsha zokuzibandakanya nezithameli zabo nokubanikeza okuningi kwalokho abakufunayo. Imithombo yezokuxhumana namawebhusayithi sekuyindawo entsha ebhekiwe, futhi njengoba abantu bayo yonke iminyaka besebenzisa i-inthanethi, akunamkhawulo wokuthi yiliphi iqembu eliba ilitshe elilandelayo.
Kuyacaca ukuthi ukumaketha kokuqukethwe kube negalelo elibalulekile ekuthuthukisweni komlando kwezimboni eziningana. Osekusele manje ukuthi uhlale phansi ubheke okwenzekayo ngokulandelayo kule mboni eyizigidigidi zamarandi.
Sithemba ukuthi ufunde olunye ulwazi oluwusizo kulesi sihloko ongalusebenzisa ngethemba lokuthi uzuze wena.
Tags: amaqiniso ebhulogiI-contnet enophawuukusatshalaliswa kokumaketha kokuqukethweumagazini we-furrowukukhangisa kwendabukoizibalo
UJosh Wardini Ungumnikeli Wezokuhlela kanye neMenenja Yomphakathi e-Hostingtribunal. Ngemvelaphi yokuqala kwezokuxhumana nobungoti ekuthuthukiseni umphakathi, uJosh usebenza mihla namalanga ukubumba kabusha ukuphathwa kwabasebenzi ezinkampanini ezinamadijithi.
Incazelo: Hlela Umsindo Usebenzisa Umbhalo
Yimaphi Amazwe Agubha uLwesihlanu Olumnyama?